Lalao tsara indrindra ao amin'ny App Store, efa nanandrana azy rehetra ve ianao? | Vaovao IPhone
Lalao tsara indrindra amin'ny App Store
Inona avy ireo lalao tsara indrindra amin'ny App Store? Ao amin'ny App Store misy lalao mahafinaritra be dia be. Nisy olona nisalasala an'izany ve? Ny olana (voatahy) manana safidy maro dia ny fahafantarana hoe iza amin'izy ireo no tena hahatonga antsika hanana fotoana mahafinaritra nefa tsy misy fahasarotana lehibe. Maro amin'ireo lohateny tsara no manana fifehezana sarotra, saingy misy maro hafa izay, tsy very kalitao, dia manana fifehezana tsotra kokoa ahafahantsika mankafy ny lalao amin'ny minitra 1.
Amin'ity lisitra ity, izay na dia isa aza, dia tsy apetraka araka ny filaharan'ny kalitao na ny maha-zava-dehibe azy, dia hasehonay anao izay heverinay fa ireo lalao 25 ​​tsara indrindra ao amin'ny App Store hatramin'ny nanombohany tamin'ny 2008. Misy ny lalao isan-karazany amin'ny lalao, noho izany azo antoka fa misy mihoatra ny iray mahaliana anao.
Ny lalao 25 ​​tsara indrindra ao amin'ny App Store
Tsy misy fetra 2: Ny saga Infinity Blade dia iray amin'ireo malaza amin'ny lalao, hoy aho, ny ady. Hatramin'ny lalao tany am-boalohany, izay tonga tamin'ny 2010, mpampiasa maro no nampidina ny lalao telo nataony. Infinity Blade 3 dia nipoitra tao amin'ny keynote an'i Apple izay nanasongadinana ny Metal. Amin'ireo telo dia heverinay fa ny tsara indrindra dia 2.
Grand Theft Auto 3: kely azo lazaina momba ilay saga GTA izay tsy fantatrao. Ity andian-lalao ity dia nampiasaina tamin'ny parodies, meme ary ny vazivazy isan-karazany, izay mampiseho ny lazany sy ny lanjany. GTA 3 no tsara indrindra amin'ny saga.
Mifarana aminao izao tontolo izao: Remix Remix: ambanin'io anarana io dia manana RPG izahay izay navoaka voalohany ho an'ny Nintendo DS. Ho antsika izay nilalao ny milina arcade taloha, The World Ends With You dia mampahatsiahy antsika ireo lalao miady izay mandrosoantsika amin'ireo fahavalo marobe, isaky ny matanjaka sy marobe izy ireo. Ho fanampin'ireo voalaza etsy ambony ireo, ity lohateny ity dia miaraka amin'ny toetoetran'ny RPG rehetra ihany koa. Azo atoro tanteraka.
Mandeha maty: ny lalao: Raha miresaka ny fahombiazan'ny andiany Walking Dead aho dia tsy mahita zava-baovao. Ity andiany ity, miorina amin'ny tantara an-tsary mitondra ny anarany mitovy, dia mampiseho amintsika ny zavatra niainan'ny vondron'olona izay manandrana miaina ao anatin'ny tontolon'ny zombie aorian'ny apokaliptika. Amin'ity lalao ity dia hilalao isika tahaka an'i Lee Everett, mpanao heloka bevava voaheloka izay tsy maintsy ho tafavoaka velona amin'ny olona maro tsy maty amin'ny fizarana enina samihafa. Halahelo azy ve ianao?
dia natanjaka: Raha tianao ny RPG dia tsy azonao atao ny mijanona tsy milalao Bastion. Tsy very maina, voafidy ho iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra ao amin'ny App Store tamin'ny taona 2012. Holazaiko fa toy ny RPG ho an'ny efijery mikasika azy io. Mbola kely sisa no holazaiko.
Tezitra: Tsy misy mahalala ve ny vorona sosotra? Taiza foana ianao? Noforonina tamin'ny taona 2009 avy amin'i Rovio, ity vondrona vorona miady amin'ny kisoa maintso nangalatra atody ity dia nahomby tokoa ka nandao ny efijery an'ny iPhone, iPod ary iPad mba hamorona marika am-barotra manokana. Na dia tsy tsara indrindra amin'ny sary aza izy, ny Angry Birds voalohany no nanomboka azy rehetra ary izany no antony mendrika anisany an'ity lisitra ity.
Limby: Aiza aho? Inona no mitranga? Eo ambanin'ity lohateny mahaleo tena ity dia hofehezintsika ny zaza ao anaty tontolo maizina tsy misy feon-kira. Tsy maintsy hitondra azy amin'ny loza hafahafa azontsika an-tsaina isika, toy ny hala lehibe izay manenjika antsika mandra-pahavitantsika azy. Fa ho aiza isika? Tokony ho any Limbo isika ary tsy maintsy mitady ny namantsika na rahavavintsika na izay zazavavy izay… hanomboka hatrany… Tsy gaga izahay fa raisina ho iray amin'ireo lalao tsara indrindra ao amin'ny App Store io.
Rayman Jungle Run: Ity lisitra ity dia mety tsy ho very endles mandeha. Ao amin'ny Rayman Jungle Run dia mila mihazakazaka (miankavanana) toy ny lalao hafa amin'ity karazana ity isika, fa eo amin'ny tontolon'i Rayman, izay mampiavaka azy manokana.
Elatra kely: misy lalao mitovy amin'izany ao amin'ny App Store, fa ny Tiny Wings no voalohany amin'izy ireo ary ilay iray mendrika ho ao anatin'ny lisitry ny lalao tsara indrindra ao amin'ny App Store. Amin'ity lalao ity dia tsy maintsy hofehezintsika ny sidina sy ny fianjan'ny vorona iray mba hahafahantsika mihetsika haingana kokoa ary tonga hatrany lavitra araka izay tratra. Tahaka ny fihazakazahana tsy misy farany izany, fa karazany hafa.
voankazo Ninja: iray amin'ireo lalao izay tsy mila fampidirana. Lalao iray izay tsy maintsy ahodinkodinantsika ny rantsan-tànantsika mba hanapahana ny voankazo ho fangaro mety lehibe indrindra. Betsaka ny horonan-tsary ao amin'ny youtube izay ilalaovan'ny saka ny Fruit Ninja, horonan-tsary mahafinaritra toy ny lalao ihany.
Jetpack Joyride: lohatenin'ny laza lehibe izay tsy maintsy hizorantsika farany lavitra araka izay azontsika atao amin'ny alàlan'ny fihazakazahana ankavanana. Jetpack Joyride dia hazakazaka tsy misy farany izay hofehezintsika ny toetra amam-panahy izay mamakivaky ny ozinina mitam-piadiana miaraka amina karazana basy masinina ahafahany manidina. Misy hetsika manokana taonina, ka azo antoka ny fahafinaretana.
Scribblenauts Remix: eo ambanin'ity lohateny ity dia manana lalao piozila mihetsika izahay izay novolavolaina voalohany ho an'ny Nintendo 3DS. Tsy maintsy fehezintsika i Maxwell eny an-dalana hanangona Starites.
Max Payne Mobile- Ny kinova finday an'i Max Payne dia kinova mendrika izay mahatonga an'ity lisitr'ireo lalao tsara indrindra amin'ny App STore ity. Lalao mpitifitra, fa tsy mpitifitra voalohany, miaraka amina backstory tsara.
Plants vs ZombiesNa dia efa misy aza ny ampahany faharoa, ny lalao voalohany dia tsy tsy misy kalitao. Ho fanampin'izany, tsy ao anatin'izany ny fividianana rindrambaiko manelingelina, izay midika fa afaka mankafy ny anaram-boninahitra tsara isika nefa tsy mila mijanona na mandoa. Tsy manana ny fanampiny amin'ny ampahany faharoa, fa tsy mila azy koa.
Chaos Rings II: Raha tianao ny Final Fantasy tany am-boalohany ary mitady zavatra mitovy amin'ny sary ankehitriny ianao, dia angamba Chaos Rings II no safidy tsara indrindra. Tsy lalao mora vidy io, fa azo antoka fa mendrika azy ny euro rehetra.
GTA: Adin'ny Chinatown- Ity no lohateny faharoa an'ny andiany GTA amin'ity lisitra ity ary satria mendrika izany. Tsy azo ambara momba azy afa-tsy ny "filalaovana dia ho hitanao."
Nova 3: ambanin'ny anarana Near Orbyt Vanguard Alliance 3 dia manana iray amin'ireo lalao olona voalohany tsara indrindra eto amin'ny App Store izahay, saingy miaraka amin'ny hery manokana sasany izay mahatonga ny lalao tsy iray amin'ireo karazany fotsiny. Efa azoko io hatramin'ny nivoahany ary mendrika izany.
Tiny kely: Nalefa tamin'ny 2011, ao amin'ny Tiny Tower dia tsy maintsy manangana ny tranontsika manokana isika amin'ny alàlan'ny fanabeazana asa fananganana. Raha ny tena izy dia mahafinaritra kokoa noho ny fahenoana azy. Ny zavatra tsara indrindra dia ny manandramanao azy, satria amin'izao ora anoratanay izao dia maimaim-poana (hafahafa izany, saingy mety hiova).
Timberman: Raha tsy afaka mametraka an'i Flappy Bird ao amin'ity lisitra ity isika satria nesorin'ny mpamorona azy tao amin'ny App Store, napetrakay Timberman, lalao iray izay toa basy amin'ny solomaso sy sary, fa izany dia miteraka fiankinan-doha be dia be ary ahazoantsika mihantsy ny namana.
Mpanapaka mahatalanjona- Rehefa milalao amin'ny touchscreens dia zava-dehibe tokoa fa tsotra ny fanaraha-maso. Fa raha tsotra loatra ny hetsika dia tsy ho mendrika izany ny lalao. Ao amin'ny Amazing Breaker dia tsy maintsy mandatsaka baomba maromaro fotsiny isika handravana ny sary eo alohantsika. Tiako be izany ary izany no nametrahako an'ity lisitra ity.
Ady Geometry 3: amiko io no tsara indrindra. Izy io dia karazana fifangaroana eo amin'ny mpitifitra olona fahatelo miaraka amin'ny lalao sambo, izay misy sarina tontolo nomerika sy feo mahafinaritra. Raha manolotra iray amin'ity lisitra ity aho dia hanome ity lalao ity aho.
Swordigo: ambanin'ity lohateny ity dia manana lalao sehatra "tsotra" isika. Inona no tsy mety amin'ireto karazana lalao ireto? Tiako izy ireo ary ampahatsiahivin'izy ireo amiko ny lalao an'ny konsoly taloha. Swordigo dia nanome fotoana mahafinaritra ahy ary iray amin'ireo vitsy nandalovako tanteraka.
Real Racing 2: lalao lalao tsy ho very amin'ity lisitra ity. RR2 dia lalao iray izay tsy maintsy hanaovana fifaninanana samihafa amin'ny fiara samihafa ary hanatsara ny fotoana. Ho ahy dia tsara lavitra noho ny RR3 ny tsy fananana fividianana entana, izay ahafahantsika milalao nefa tsy mila mijanona na mandoa rehefa tadiavin'ny lalao. Ho fanampin'izay dia azo tanterahina izany, tsy toy ny sagas hafa toa ny Asphalt, izay na dia marina aza fa tena mahay izy ireo ... dia tsy misy intsony ny zava-misy.
Hetezo ny tady: fanandramana: Tsy fantatrao ve ity bibikely maitso mihinana vatomamy ity? Tokony izany. Ny tanjonay dia ny manome ny vatofantsika vatomamy iray isaky ny haavo, izay tsy maintsy hanapahantsika ny tadiny amin'ny fotoana marina, ary koa hampihetsika ny rafitra samihafa hahatratrarana azy. Tandremo, raha tsy mahazo isika dia malahelo ny biby fiompintsika.
PAC-MAN 256: ary farany nefa tsy farany, ny comecocos tamin'ny taonjato faha-256. PAC-MAN 6 dia kinova amin'ny lalao angano izay tsy maintsy handrosoantsika foana na, raha tsy izany dia hanenika antsika ny banga. Ary koa, manana hery samihafa isika hamela antsika hamono matoatoa amin'ny fomba samihafa. Ny zavatra tsara dia maimaim-poana izany. Ny zavatra ratsy dia tsy ho afaka hilalao hery isika raha tsy miandry / mandoa aorian'ny lalao XNUMX.
Ahoana ny hevitrao momba ny lalao tsara indrindra amin'ny App Store? Inona ny lalao tianao indrindra amin'ny App Store? Ao anaty lisitra ve io?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Lalao tsara indrindra amin'ny App Store
Ny isa 13, giochi, io ve giochi sy rompicapo?
Jesosy, diso ny fanoratako ny anaran'ny isa 13. Ny lalao izay tondroina dia ny Hook Champ. Misaotra tamin'ny fampitandremana. fiarahabana!
Beto dia hoy izy:
Ny IGN dia avy any Etazonia ary any San Francisco tsy avy any UK…. 100% atoro
Mamaly an'i beto
Alee dia hoy izy:
Lalao tena tsara, tiako manokana ny Asphalt 5
Fanontaniana iray: INONA no lalao azo? (ilay manana moto)
Valiny tamin'i Alee
Gui dia hoy izy:
Ary ny Doodle Jump? 🙁
Mamaly an'i gui
@beto, sokafy ny pejy dia lazao UK 😉
Lalao inona ny moto amin'ny sary? = (= (= (= (= (= (= (= (= (= (
Joseph !! dia hoy izy:
ary misy TAP TAP sasany ?? sa ny tanàna sim ?? 🙁 OSMOS tsy haiko hoe inona ilay izy .. hehe
Valio i joseph !!
COWr dia hoy izy:
Ho ahy, iray amin'ireo tsy azoko adino ny Bejeweled 2
Ary miaraka amin'ny BLITZ iray minitra dia mety izany mandritra ny filaharana na efitrano fiandrasana.
Valiny amin'ny COWr
rif457 dia hoy izy:
Ary ninja voankazo ??????
Valiny amin'ny rif457
Lahatsoratra tsara, arahaba soa!
Tsy tiako mihitsy ity lisitra ity, misy lalao tsara kokoa sy mampiala voly kokoa noho ireo. X farafaharatsiny raha ny fijeriko mazava ho azy.
Elaela aho vao nahita lisitra mahonena toa izao ... raha mitady lisitra ianao hanapahana hevitra ny lalao hovidiana, tsy ity no xD
izany dia hoy izy:
mister flo dia hoy izy:
Salama lalao tsara fa raha tianao ny vorona tezitra dia manoro hevitra ny kamio sy karandoha aho, ny lalao dia mitovy saingy miaraka amin'ny kamio tena tiako manokana izany manantena aho fa tianao izany
Mamaly an'i mister flo
cristiansalasduran dia hoy izy:
ny voalohany dia tena ratsy xd ke filokana banga
Mamaly an'i cristiansalasduran
Nicolas dia hoy izy:
Tena tiako ilay zombie hiway (FITORIANA)
Mamaly an'i Nicolas
fabii dia hoy izy:
iray amin'ireo lalao tsara indrindra ny aiza ny ranoko (aiza ny ranoko, amin'ny Espaniôla). Manoro hevitra aho 🙂
Mamaly an'i fabii
Jose santana dia hoy izy:
Ho ahy ny lalao tsara indrindra sy mora indrindra dia ny effet effet 3, 89 cents fotsiny ny vidiny ary mampiala voly tokoa amin'ny sary sy hetsika tsy resy !!!
Valiny tamin'i Jose Santana
Tsy tsara ireo lalao ireo, misy maro, betsaka kokoa noho ireo rehetra ireo
ary tsy hita koa ny jetpack, ninja voankazo ary maty maty
Tsy tsara izany, ny lalao tsara indrindra amin'ny App dia MINECRAFT. Fantatrao ve !!!!!!!
Ha ha ary koa boos 2
Ary koa ireo SURFERS SUBWAY
Jexs dia hoy izy:
Tsy azonao adino ireo avy any amin'ny supercell (fifandonana amin'ny foko, boom beach, hay hay)
Mamaly an'i Jexs
David Cuadrado Fernandez dia hoy izy:
Leo harena na tontolon'ny Goo an'ny tsara indrindra
Valiny tamin'i David Cuadrado Fernandez
Leo Fortuny na tontolon'ny zava-dehibe Goo
miafina dia hoy izy:
Namela saga lehibe iray The Room ianao. Mahavariana amin'ny sary. Manoro hevitra ary ny saga iray manontolo
Valiny amin'ny Enigma
Afo maimaim-poana no tsara indrindra
Rosalia dia hoy izy:
Lalao piozila baolina
Valiny tamin'i Rosalia
DRK | Olombelona Random dia hoy izy:
Tsy nametraka ny Afo Maimaim-poana izy ireo ary manana fampidinana mihoatra ny 10 tapitrisa. Ratsy daholo ny lalao rehetra. Roa no mahaliana ahy fotsiny: ady jeometrijia 3 ary tena hazakaza-piara 2 (efa lalaoviko io hahaha).
Valiny amin'ny DRK | Random Human
Valiny Q3 2017: Mitombo hatrany ny Apple ary tsy ampoizina ny iPad
TestFlight dia manitatra ny isan'ny beta testers ho an'ny mpampiasa 10.000